Indlu yasefama yevintage kumaphandle aseNormandy
Montpinchon, Manche, France
Igumbi lakho lokulala e indawo yokuhlala nenesidlo sakusasa sinombuki zindwendwe onguNeil
ILa Bicyclette Bleue, yindlu yakudala yasefama eyakhiwe phakathi kwe-1785 kunye ne-1806 ihleli kwihektare yomhlaba enegadi, idlelo, igadi yeziqhamo, indawo yokuhlala kunye nechibi kwi-hamlet encinci kwindlela ezolileyo enzulu phakathi kwamaphandle aseNormandy, imizuzu eli-15 ukusuka kuzo zombini iidolophu. ulwandle kunye nedolophu yaseCoutances.
Sinegumbi eli-1 elifakwe ngendlela yangoku kodwa yakudala. Igumbi lingabhukishwa nokuba ngamawele / kabini kunye ne-en-suite.
Indawo yokubasa umlilo ngaphakathi endlini: umbane, esebenzisa iinkuni
ILa Bicyclette Bleue ime ecaleni kwendlela ezolileyo kwindlwana encinci yezinye izindlu ezisixhenxe kufutshane nelali yaseMontpinchon. Lo mmandla waseNormandy ukwisiseko seContentin Peninsula kwisebe laseManche eLower Normandy. Yindawo yasemaphandleni kakhulu, ilizwe letshizi, ikhrimu, iiapile kunye necider. Sineenduli eziqengqelekayo kunye neentlambo kunye nentaphane yezilwanyana zasendle ezibandakanya iintaka ezidla inyama, izikhova, iibheji, iCoypu, iintuku, amalulwane, kwaye ukuba unethamsanqa, iihagu zasendle kunye namaxhama. Siyimizuzu engama-20 ukusuka elunxwemeni, imizuzu eli-15 ukusuka kwidolophu entle yecathedral yaseCoutances, ngaphezulu kwesiqingatha seyure ukusuka eSt, Lo, kwidolophu yaseManche kwaye malunga nemizuzu engama-40 ukusuka eParc Naturel Régional des Marais du Cotentin et du Bessin. , egubungela i-swathe enkulu ye-Manche ephakathi, malunga ne-40 mins ukusuka e-Granville kunye nekhonkco kwi-Isles de Chaussey kunye neyure ukusuka kwiilwandle ze-D-day, i-Bayeux, i-Caen kunye ne-Le Mont St. Michel. Sineendawo zokutyela zasekuhlaleni ezimangalisayo nezinexabiso elincomekayo, iicawe zakudala nezanamhlanje kunye nembali ngobuninzi.
Kananjalo siya kuhlala siphakela iindwendwe zethu isidlo sakusasa. Ukuba iindwendwe zikhetha ukutya isidlo sangokuhlwa, oku kwabelwana nathi nokuba kukwiholo yokungena okanye kwindawo yokutyela engaphandle. Isidlo sangokuhlwa sixabiso elongezelelweyo kwaye sifuna isaziso seeyure ezingama-24. Sikwabonelela nge-snack yangokuhlwa esiza kuyinikwa sithi kodwa singabelwanga nathi. Ukuba iindwendwe zingathanda ukuba nepiyano yangokuhlwa yonke into ekufuneka beyenze ukuze basazise.
Kananjalo siya kuhlala siphakela iindwendwe zethu isidlo sakusasa. Ukuba iindwendwe zikhetha ukutya isidlo sangokuhlwa, oku kwabelwana nathi nokuba kukwiholo yokungena okanye kwind…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Montpinchon